Shiinaha siman Oo Ilkaha Nooca Double Roller Burburiyey warshad iyo alaab | Kordhi
Mashiinada Henan Ascend waa shirkada hogaamineysa taas oo ah soosaarista xirfadleyda dhuxusha dhuxusha laba jibbaaran, ilkaha dhuxusha dhuxusha dhoobada leh, dhuxusha dhuxusha iwm in kabadan 10 sano, ilkaheena dhuxusha dhuxusha ah oo leh naqshad cusub
Waxaa jira labo rollel cylindrical oo si siman u jiidanaysa rakibidda iskudhaf isku mid ah, halkaas oo mid ka mid ah rullaluistemadka dhalista la dhaqaajin karo isla markaana kan kale ee rullaluistemadka ah uu go'an yahay. Wadayaasha mootada korontada, labada rolle ayaa sameeya wareejin ka soo horjeedda, taas oo soo saarta xoog hoos u dhac ah si ay u burburiso qalabka u dhexeeya laba roller oo burburaya; walxaha jajaban ee la jaan qaadaya cabirka loo baahan yahay ayaa lagu riixaa iyadoo la duubayo lagana soo saarayo dekedda sii deynta.
Mabaadi'da Shaqeynta ee Burburinta Rullaluistemadka Double
Qalabka dhagxaanta la burburiyey ayaa ku dhex dhaca labada rolle iyada oo loo marayo dekedda quudinta si loo burburiyo, qalabka dhammaystiranna si dabiici ah ayuu u dhacayaa Haddii ay dhacdo qalab adag ama aan la jebin karin, duubku wuxuu si otomaatig ah dib ugu laaban karaa ficilka aaladda dhululubo ama guga, si loo kordhiyo nadiifinta duubista oo loo daayo qalabka adag ama aan la jebin karin, kaas oo ka ilaalin kara burburka duubista dhaawaca. Waxaa jira farqi gaar ah oo u dhexeeya labada rollel ee rogrogmada ah. Badalida farqiga ayaa xakameyn kara cabirka walxaha. Guri burburiye laba jibaar waa inuu adeegsado labo ka soo horjeed ah oo wareega wareega ah, halka bur buriyaha ka soo horjeedana uu isticmaalo labo lamaane oo ka soo horjeedda wareega wareega oo loogu talagalay burburka howlgalka.
Ka sokow soo saarista gunta qalabka wax lagu burburiyo, waxaan sidoo kale ku haynaa tiro badan oo dayactir ah bakhaarka. Qaybta ugu weyn ee xirata qalabka wax lagu burburiyo waa saxanka wax lagu duubo, oo ka samaysan dawaar sare Manganese Mn13Cr2.
Model Cabbirka quudinta (mm) Bixinta granularity (mm) Soo saar
Cabirka (L × W × H) (mm) Miisaanka (kg)
Faa'iidooyinka Rullaluiste Gawaarida
1. Burburiyaha wax duudduuban wuxuu ku guuleysan karaa saameynta burburin iyo shiidi yar isagoo yareynaya cabirka walxaha isla markaana hagaajinaya sifooyinka burburaya waxyaabaha la burburinaayo. Waxyaalaha la jajabiyey badanaa waa xabado yar yar oo u eg irbadaha oo aan lahayn xiisad ama dildilaac
2. Qalabka rullaluistemadka ilkaha ee burburka wax lagu duubto wuxuu ka sameysan yahay wax soo saar sare oo xirxiran, oo saameyn xoog leh ku leh iska caabbinta iyo iska caabbinta dharka sare. Waxay leedahay faa'iidooyinka luminta yar iyo heerka hoos u dhaca yar marka qalabka la burburiyo, iyadoo la yareynayo kharashka dayactirka iyo dayactirka ee marxaladda dambe kharash qaali ah iyo adeeg dheer.
3. Mashiinka wax lagu burburiyo waxaa lagu qalabeeyaa fikradda mashiinka macdanta horumarsan, oo lagu qalabeeyay aalado horumarsan ilaalinta deegaanka, iyo wax soo saar xiran. Nidaamka wax soo saarka oo dhami wuxuu leeyahay buuq hoose, boodh hooseeya, iyo wasakh yar, oo buuxisa shuruudaha qaran ee ilaalinta deegaanka.
Hore: Portabel Alluvial Placer Dahab Dahab ah Trommel Sluice Box
Xiga: Nuurad Dhuxul ah Glass Hammer burburi Mill Machine